Alshabaab oo Mar Kale looga Shakiqabo Xeebaha Puntland iyo Dhaqdhaaqa Sanaag iyo Haylaan – Radio Daljir
Juunyo 18, 2017 12:59 b 0
Warar hordhac oo ka soo baxaya laamaha ammaanka Dawladda Federaalka ayaa sheegaya suurtagalnimada Alshabaab oo mar kale soo wajaha deegaan xeebeedyada Puntland, siiba qaybo kamid ah barihii kal hore ay ka soo deegaan iyo kuwo cusub oo hadda la saadaalinayo.
In kasta oo aan weli warbaahintu helin warar faahfaahsan oo dhaqdhaqaaqa Alshabaab ku saabsan, misana xogaha qaarkood waxay tilmaamayaan in uu isa soo tarayo dhaqdhaqaaqa Alshabaab ee xeebaha Puntland ayaga oo ku soo gudbay dhawr doonyood oo noocyada kalluumaysiga ah.
Dhaqdhaqaas Alshabaabka mid la mid ah ayaa laga soo sheegayaa gobolada Sanaag, Haylaan iyo Togdheer, siiba aagagga Ceerigaabo, Galgala iyo togga Dhoqor.
Laamaha ammaanka Puntland iyo xukuumadda ayaan weli wax war ah ka soo saarin dhaqdhaqaaqa labada jiho ee kala duwan, hase ahaatee saraakiil dawladda oo aan la xiriirnay waxay noo sheegeen in aysan moogayn, si toos ahna ula socdaan dhaqdhaqaaqyada Alshabaab.
Warka ku saabsan “Alshabaab doonyo wata iyo kuwo lugayna oo aan dhulka kala aqoon, kuna soo wajahan xeebaha Puntland iyo gobolada Sanaag iyo Haylaan” ayaa todobaadkii ugu dambeeyey ahaa kuwo isa soo taraya, dhawr jeer oo horena ay dad shacab ahi Radio Daljir ku soo wargaliyeen xogaha dhaqdhaqaaqa.
Puntland ayaa sagaalkii bishaan Juun ku dhawaaqaday guluf ballaaran oo ka dhan ah Alshabaab kaddib markii la weeraray xarun ciidamada daraawiishtu ay ku lahaayeen tuulada Af Urur, weerarkaas oo khasaare ballaaran oo dhimasho iyo dhaawacba loo geystay ciidamada Daraawiishta Puntland, waxaana Puntland sheegtay dagaal adag in ay la geli doonto Alshabaab, kana sifayn doonto deegaannadeeda, isla markaana ay u aargudi doonto askarteeda.
Khamiistii isla todobaadkan la soo dhaafay Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo furay kalfadhigii 39aad ee golaha wakiilada Puntland waxaa uu ku celceliyey Puntland in ay u diyaargarawday duullaan xooggan oo lagu qaado Alshabaab, isaga oo xusay in meel kasta oo Puntland kamid ah ay ka bilaabmi doonaan hawlgallo ka dhan ah Alshabaab.
Khudbadda madaxweynaha waxaa ku jiray hadallo kulul oo ku saabsan ammaanka iyo Alshabaab, ayna kamid ahaayeen “Puntland ma ooydo ee waa aarsataa!”
Puntland muddo ka badan toban sano ayay dagaallo kula jirtay Alshabaab, muddadaas dheer waxaa dhacayey mararka qaar dagaallo toos ah oo dhaxmarayey ciidamada Puntland iyo kuwa Alshabaab, khasaarooyin labada dhinac ahna waa ay ka dhasheen, in kasta oo ay u badnaayeen dagaalladaasi tooska ahi kuwo inta badan guushu raacaysay ciidamada Puntland. Saas oo ay tahay waxaa jiray weeraro gaadmo ah, qaraxyo dad iyo gaadiidba loo adeegsaday, iyo miinooyin dhulka lagu aasay oo ciidan iyo shacab Puntland ahba khasaarooyin ka soo gaaray.
Sannadkii 2016 biloowgiisii waxaa dhacay mid kamid ah duullaannadii Alshabaab ay ku soo qaadeen deegaannada Puntland midkii ugu cuslaa, waxaana uu ahaa mid boqollaal hubaysan oo Alshabaab ahi soo wajaheen Puntland, iyaga oo ka soo degay deegaanno xeebeedka gobolada Mudug iyo Nugaal. Duullaanka wuxuu ahaa midkii ugu weynaa ee Alshabaab ay ku soo qaaddo Puntland waana looga awood roonaaday Alshabaab.
Duullaanka Alshabaab waxaa uga dhintay tiradii ugu badnayd inta la xasuusto, waxaana Puntland ay ka qabatay maxaabiistii ugu badnayd.
Alshabaab dhinacooda xilligaas si dadban ayay u muujiyeen in dagaalka lagu jabiyey, waxa ayna sheegeen in ay ka aargudan doonaan Puntland.
Xilligaas duullaanka iyo jabka is xigay ee Alshabaab wixii ka dambeeyey, weerarada Alshabaab ee ku aaddan Puntland waxay u muuqdeen kuwo soo kordhaya, maalinba maalinta ka danbaysana isa soo taraya, hadana wata abaabul horleh.